नेयमारले बार्सिलोनामै भविष्य नरहेको स्वीकारे | Hamro Khelkud
नेयमारले बार्सिलोनामै भविष्य नरहेको स्वीकारे
एजेन्सी – ब्राजिलियन राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान एवं बार्सिलोनाका फरवार्ड नेयमारले आफ्नो भविष्य बर्सिलोनामै मात्र नरहेको स्वीकारेका छन्। गत अक्टोबरमा बार्सिलोनासँग ५ वर्षे नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेयमारले खुलेआम आफु बार्सिलोनामै बसिराख्ने पक्का नभएको बताएका छन्।
गत सिजन म्यानचेस्टर युनाइटेड र पेरिस सेन्ट जर्मन नेयमारका लागि १ सय ८० मिलियन युरोसम्मको प्रस्ताब गर्न तयार रहेका उनकै एजेन्ट वाग्नर रिबिएरोली जानकारी दिए। त्यसैकारण बार्सिलोनाले नेयमारलाई १ महिनापछिनै नयाँ सम्झौता गर्न मनाएको थियो। हाल नेयमारले बार्सिलोनामा नयाँ सम्झौता बमोजिम प्रति हप्ता ३ लाख ५० हजार युरो कमाउँछन्।
हाल ब्राजिलमा छुट्टि मनाइरहेका नेयमारलाई पत्रकारले एक कार्यक्रममा म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग अनुबन्धित हुनेबारे प्रश्न गर्दा उनले खुलेर जवाफ दिए। सुरुमा ठट्यौली पारामा ‘हुन्छ, वा एइबार पनि नराम्रो छैन!‘ भनेर उत्तर दिएका नेयमारले केहि समयपछि भने भविष्यको बारेमा केहि भन्न नसकिने बताए। ‘भोली के हुन्छ कसलाई थाहा छ र? म अहिले बार्सिलोनामा खुसि छु र मलाई सबैथोक मिलेको छ। तर. समयसँगै जे पनि हुन सक्छ।’
गत सिजन तेश्रोपटक कोपा डेल रे जितेका नेयमारले व्यक्तिगत रुपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गएपनि बार्सिलोनाको लागि भने उत्तम हुन सकेन। ला लिगामा दोश्रो स्थान प्राप्त गरेको बार्साले च्याम्पियन्स लिगमा भने क्वार्टरफाइनलमै पराजित हुन पुग्यो। नेयमारले नयाँ सिजनको लागि भने टोलीले अझै मेहेनत गर्ने बताए।
‘मलाई आशा छ कि अर्को सिजन हामीले थुप्रै खुशी र सफलता प्राप्त गर्नेछौं। म अर्को सिजन सुरु हुने तयार हुँदैछु। यो मेरो करियरकै एक महत्त्वपूर्ण सिजन हुनेछ। म यसका लागि एकदम उत्सुक छु।’